सेक्स गर्ने निश्चित समय कुन हो ? र कतिपटक गर्ने ? - Malayakhabar
होम पेज यौन र जीवन सेक्स गर्ने निश्चित समय कुन हो ? र कतिपटक गर्ने ?
सेक्स गर्ने निश्चित समय कुन हो ? र कतिपटक गर्ने ?
एजेन्सि := सेक्स गर्ने निश्चित समय छैन । उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो हुन्छ ।
एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ । एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध र अनुसन्धानबाट तपाईंलाई स्वस्थ राख्न विहानको समय नै सेक्सको लागि उपयुक्त रहेको पत्ता लागेको छ । सबैभन्दा उत्तम समय भनेको विहान साढे ७ बजे हो ।
स्टमडीको अध्ययन अनुसार यो समयमा शरिरमा सेक्स हार्मोन्सको मात्रा बढि उत्पन्न हुने भएकोले विहानै ओछ्यानमा ७ बजेर ३० मिनेटमा सेक्स गर्न सुरु गर्दा अति उत्तम हुन्छ । यतिमात्रै होइन विहानको सेक्सले दुबैजनालाई दिनभरी थकान महसुस नहुने, दिमाग पनि तिक्ष्ण हुने र दिनभरी ताजा महसुस हुने गर्दछ । इटलीमा गरिएको अध्ययनबाट विहान साढे ७ बजे सेक्स गर्दा उत्तेजना चाँडै हुन्छ ।
सेक्स गर्नुस् मोटोपन घटाउनुस्
अमेरिकाको एक सोध वैज्ञानिक र सेक्स सलाहकार डा. डेबी हरबेनिकले एक अनुसन्धानको क्रममा सेक्सको सबैभन्दा उत्तम समय विहान नै रहेको पत्ता लगाए । डा. डेबीका अनुसार विहानको समयमा सेक्स गर्दा हाम्रो शरिरबाट निस्कने केमिकल्सबाट धेरै सन्तुष्टि मिल्छ । जसबाट खुसी मात्रै होइन स्वस्थ पनि भइन्छ । यसैगरी अमेरिकी अर्का सेक्स सलाहकार जेन ग्रीनरका अनुसार विहानको समयमा सेक्स गर्दा राम्रो व्यायाम पनि हुन्छ । सेक्स एकप्रकारको व्यायाम पनि हो । उपयुक्त समयमा नियमित सेक्स गरे पनि मोटोपन घट्ने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
सेक्स कतिपटक गर्ने ?
सेक्स कतिपटक गर्ने भन्ने नापतौल छैन । आवश्यकता अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । तर, भनिन्छ नी धेरै खायो भने चिनि पनि तितो हुन्छ । उपयुक्त समयमा र आफ्नो पार्टनरको मुड हरेर सेक्स गर्न सकिन्छ । त्यसैले एकसातामा तीनपटक सेक्स गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । विहानमा सेक्स गर्दा महिला र पुरुष दुबैमा प्रजनन क्षमता पनि बढ्छ । लेखिका जेनी ट्रिप्लेटका अनुसार विहानमा सेक्स गर्दा महिलाहरुलाई धेरै शक्ति प्राप्त भएको महसुस हुन्छ ।
विहानको सेक्समा कसरी मजा लिने ?
विहानको समयमा पूजापाठ गर्ने, खाना पकाउने, अफिस जाने तयारी आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसको लागि प्रयाप्त समय छ र पार्टनर टेन्सनमा छैन भने विहानमै सेक्स गर्दा राम्रो । विहानको समयमा सेक्सको साथसाथै पार्टनरसँगै बाथरुममा ‘शावर’मा नुहाउदै मजा लिन पनि सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । यसो गर्दा आफ्नो पार्टनरसँग अझै बढि आत्मियता प्राप्त पाउने मात्रै होइन रमाइलो पनि हुन्छ ।
रातिमा सेक्स किन नगर्ने ?
विहानमा सेक्स गर्ने तर रातीमा किन नगर्ने भन्ने जिज्ञासा लाग्न सक्छ । रातीमा खासगरी खाना खाएर बेडमा जाने र सुत्नेबेला सेक्स गर्छन् धेरैजसो जोडिले । तर, खाना खाएर सेक्स गर्नु र खाना खाएर नुहाउनु भनेको रोग निम्ताउनु हो । त्यसैले रातीमा सेक्स गनुभन्दा विहान मै गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । रातीको सेक्समा नयाँपन नहुने पनि बताउने गरिएको छ ।
अघिल्लो लेख धर्म, विज्ञान र कोरोना महामारी
पछिल्लो लेख जनउद्धार केन्द्रद्वारा खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका १२ नेपालीलाई खाद्यान्न सहयोग।
श्रीमान श्रीमतीबीचको उमेर ग्यापले यौन जिवनमा पार्ने प्रभाव।
महिलाहरूमा देखापर्ने यौन रोगहरु।
धनी हुने सबैभन्दा सजिलो तरिकाः यौनसम्बन्धलाई उत्कृष्ट बनाउनुहोस्।
मलेसियामा कोरोनाले एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु, चुम्लुङद्वारा अन्तिम दाहसंस्कार सम्पन्न।
मलाया खबर न्युज डेस्क - June 12, 2021
क्वालालम्पुर (मलेसिया):= कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणले वैदेशिक रोजगारी क्रममा मलेसियामा सुरक्षागार्डको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका एक नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको छ। नेपाल ठेगाना ताप्लेजुङको...
यौन हिंसा प्रकरणः सुरक्षा घेरामा राउटे बस्ती।
कर्णाली := राउटे युवतीमाथि सामूहिक यौन हिंसाको घटना सार्वजनिक भएपछि सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–९ दमारस्थित राउटे बस्तीमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । घटनालगत्तै बस्ती सिल...
ओमान : नेपाली श्रमिकको सहजता,सजिलोका लागि घुम्ती सेवा दिँदै दूतावास।
काठमाडौं:= ओमानमा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकको सहजताको लागि घुम्ती सेवा दिने भएको छ ।आउँदो जुन १५ अर्थात् असार ११ गते ओमानको...
युरोकपमा आज तीन वटा खेल, विश्वमै शीर्ष स्थानको बेल्जियमले रुससँग खेल्दै।
एजेन्सी := युरोकप फुटबलमा आज तीन वटा खेल हुँदैछन् । बेलुकी पौने सात बजे वेल्स र स्विजरल्याण्ड खेल्दैछन् । विश्व वरीयतामा स्विजरल्याण्ड१३ औं स्थानमा...
स्वादिलो जामुनमा औषधीय गुण।
जामुन जति स्वादिलो हुन्छ, त्यति नै यसका औषधीय गुणहरूले यो पूर्ण रहेको पाइन्छ । यसलाई विभिन्न स्थानमा विभिन्न नामले चिन्ने गरिन्छ । जस्तै–राजमन, कालाजामुन,...